Nezvedu - Shijiazhuang Hantex International Co., Ltd.
isu dzidzira mu kwekurasira Hanzu, Mhuri zvigadzirwa, akasiyana Ekusimudzira zvinhu kune vatengi pasirese.
Hantex International Co Ltd. inowanikwa muDhorobha reHebei dunhu, inzvimbo inozivikanwa yeMachira uye Hembe kugadzirwa muChina. Pamugwagwa mukuru, maawa matatu kuchamhembe kuenda kuBeijing Airport, uye maawa matanhatu kuchamhembe-kumabvazuva kuTianjin Seaport, uye maawa masere kuMabvazuva kuenda kuQingdao Seaport.
With makore 15 'ruzivo mune dzimwe zvokutengeserana, isu dzidzira mune kwekurasira Hanzu, Household zvigadzirwa, siyana Kukwidziridzwa zvinhu kuti vatengi mhiri nyika. Zvakare isu takanga takagadzirwa zvinobudirira Mechanical uye zvigadzirwa zvemagetsi kubvira 2008. zvinhu zvedu zvikuru zvinosanganisira Machira, Yekumba machira, Yunifomu, Kwose, Bhachi, Shirts, Mabhurugwa uye zvikabudura, Rainwear, Castings kana Forgings uye machining zvikamu, Pumps, Led SMD, Led Lights , Solar windmill, Solar zvipo, nezvimwewo Kutengesa kwedu kwegore kunosvika $ 8 miriyoni.
Seimwe yekambani inotungamira yekubuditsa kunze kwenyika, isu tinogadzika tinobatanidza tekinoroji, indasitiri nekutengeserana. Parizvino, isu taive nemafekitori matatu, imwe yehembe, imwe yePlastic Rainwear uye imwe yeKukanda. Zvakare isu tinobata anopfuura makumi mashanu mafekitori ari kuita Row zvigadzirwa, zvishongedzo uye maindasitiri sevadyidzani vakanaka kutenderedza China.
Imba-imba Kugadziridza Yemhando
Kune matatu QC mune yedu department rezvekutengesa uye 2 QC mune ese emafekitori edu. Izvi zvinotibvumidza isu kunyatso kudzora mhando uye kuona on-nguva dhirivhari.
Izvo Zvigadzirwa Zvikuru Zvinosanganisira
Isu Tinovimbisa Kukupa Iwe Na
Iyo Mission Chirevo Chekambani
1) Zvipfeko zvakapfava-goko, Sutu sutu, Pasi jasi, kwete chete reVarume neVakadzi, asi zvakare revana.
2) Mhando dzese dzeRainwear, dzakagadzirwa nePV, ​​EVA, TPU, PU Leather, Polyester, Polyamide zvichingodaro.
3) Machira Ekushanda, akadai seShati, Cape neApron, Jaketi neParka, bhurukwa, Shorts uye Kwose, pamwe
mhando dzeRinoratidzira Zvipfeko, izvo zvine Zvitupa zveEC, EN470-1, EN533, EN531,
BS5852, NFPA2112 uye ASTM D6413.
4) Zvimwe Zvemhuri uye Zvekunze Zvigadzirwa
1) Yakawedzera Yakanakisa Sevhisi, Yakakwira mhando uye Mamwe Makwikwi Mitengo
2) Pindura ipapo, Sample mukati me7days, Dhirivhari nenguva.
3) Kurongeka kudiki kunogamuchirwa.
Sevhisi inogadzira kukosha, hunyanzvi hunowana mhando
Hwakagadzwa muna 2008, Hantex iri muna Shijiazhuang guta Hebei Province, inova inokosha muzinda Whitehead Textile uye nguo indasitiri mu China. Iawa rimwe chete kuguta reBeijing neHigh-Speed ​​njanji. Nemarori, maawa mana kuenda kuTianjin Port uye maawa matanhatu kuenda kuQingdao Port paHighway.
Tiine ruzivo rwema20years mukutengeserana kwenyika dzese, isu tinotengesa kunze kwekuwanda kweSoft-shell Clothing, Ski Garments, Down Garments, Fashoni Rainwear, Work Cloths uye Mhuri Zvigadzirwa kuEurope, USA neSouth America, Africa, South-kumabvazuva kweAsia uye Middle East, etc.
Seimwe yemakambani anotungamira ekurasira kunze, tinobata anopfuura mafekitori e100 sevadyidzani vakanaka kuzere neChina, vari kuita Textile, Micheka yePurasitiki, Hanzu, Hardware nezvimwe.
Tine zvikwata zvehunyanzvi zvekushandisa zvine hungwaru kudzora maitiro. Tine zvakanaka mukurumbira mune zvigadzirwa 'zvemhando yepamusoro uye mushure mekutengesa sevhisi. Tiri kutarisira kuve Sourcing Center muChina yeVatengi.
Kuratidza MuCanton Fair
Ndokumbira utarise imba yedu yekuratidzira kuti uwane zvaunoda, wobva watitumira email nhasi. Mibvunzo yako inozokosheswa uye maOEM / ODM mirairo inogamuchirwa.
Runhare. + 86-18932936396, 18932936328,18932939011